Nezvedu - Xiamen Kinghow Kunze Kwechigadzirwa Co, Ltd.
KingHow Kubva 2005
Semugadziri webhegi, isu tiri kuburitsa yakazara yakazara mabhegi anopfuura makore gumi nemashanu. Nemaitiro edu emhando yepamusoro uye evatengi, isu tave tichabatana nevatengi vedu kuti vagadzire zvakanakisa zvigadzirwa zvakawanikwa.
Tinotenda vatengi vedu pasi rese, avo vakaita kuti tibudirire uye tichipfuura makore mazhinji muiyi indasitiri. Izvo chete zvatinofanira kuita kuramba uchipa mhando yepamusoro uye mutengo wakanakisa wevatengi vedu kuti vakunde. Gamuchirai zvakanyanya mutengi kuti mutaure uye uvake hukama hwakareba.
Nzvimbo dzedu huru dzechigadzirwa dzinosanganisira mabhegi, mabhegi emidziyo, mabhegi emidziyo, mabhegi eturu, chiuno kurongedza, mabhegi echikoro uye nezvimwe zvinoshandiswa kune vekunze, mitambo yekurovedza muviri, kufamba, kudzokera kuchikoro, zvishandiso zvemidziyo, laptop yedhijitari uye kushambadzira chinangwa. Isu tinotakurawo yakakura yekutengesa yezvakagadzirwa zvigadzirwa zvinoenderana neyedu zviwanikwa, senge musasa tende, nguwani & ngowani, amburera & raincoat, zvipfeko, nezvakarukwa nezvimwe.
Kune vatengi vedu, tinovimbisa zvinotevera
● kuzvipira kwedu kune husingaenzaniswi mhando nekuvimbika
● edu akanakisa mitengo, ingave yako-kugadzirwa kana kunze-kutsvaga
● zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoenderana nezvinotsanangurwa
● kuendesa panguva uye kupa yakanaka yekutumira mhinduro yekutarisa
Isu tiri yako turnkey mhinduro. Shanyira iyo peji rekubata kufona, e-mail, uye kutanga nesu nhasi.